चिकित्सक संघ कोशीको अध्यक्षमा डा. सिलवाल निर्वाचित – BFM 91.2
विराटनगर, ६ माघ । नेपाल चिकित्सक संघ कोशी विराटनगरको अध्यक्षमा डा. फरवार्ड सिलवाल निर्वाचित हुनुभएको छ । सिलवालले ३ सय ६१ मत ल्याएर अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको हो । सिलवालले प्रतिस्पर्धी डा. कैलाश श्रेष्ठलाई ९० मत अन्तरले पराजित गर्नुभयो ।
संघमा श्रेष्ठ समूहबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र एक जना सदस्य गरि तीनजना पदाधिकारीबाहेक सबै पदमा सिलवालको समूह निर्वाचित भएका छन् । संघको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा श्रेष्ठ समूहबाट डा. सन्जिब कुमार ठाकुरले ३ सय १८ मत ल्याएर निर्वाचित हुनुभयो । उहाँका प्रतिस्पर्धी डा. नविन कर्णले ३ सय २ मत प्राप्त गर्नुभयो । उपाध्यक्षमा डा. बालकृष्ण साहलाई २५ मत अन्तरले हराउँदै डा. यज्ञराज खरेल निर्वाचित हुनुभयो । खरेलले ३ सय २२ मत प्राप्त गर्दा साहले २ सय ९७ मत ल्याउनुभयो ।
महासचिवमा डा. राजेन्द्र चौधरी निर्वाचित हुनुभयो । चौधरीले ३ सय ५१ मत ल्याएर विजयी हुँदा डा. रविराज सिंहले २ सय ७५ मत प्राप्त गर्नुभयो । कोषाध्यक्षमा डा. सुधिर श्रेष्ठले ३ सय १० मत ल्याएर निर्वाचित हुनुभयो । उहाँका निकटतम प्रतिस्पर्धी सिलवन्त सेन श्रीवास्तवे ३ सय ६ मत ल्याउनुभयो । सहकोषाध्यक्षमा डा. जुबिन सिलवालले ३ सय ८० मत ल्याएर निर्वाचित हुनुभयो । उहाँका प्रतिस्पर्धी डा. सरवेस कुमार झाले २ सय ४८ मत प्राप्त गर्नुभयो ।
सहसचिवमा सुनिल रेग्मीले ३ सय ६८ मत ल्याएर निर्वाचित हुनुभयो । उहाँका प्रतिस्पर्धी २ सय ५९ मत ल्याउनुभयो । सदस्यहरूमा डा. रोशन खड्का ३ सय १७, डा. अमर कुमार यादवल ३ सय २५, डा. अरबेन्द्र कुमार महतोले ३ सय २५, डा. अन्जु देवले ३ सय ९३, डा. पार्थव गुरागाईले ३ सय १८ र प्रेरणा दाहालले ३ सय ५० मत ल्याएर निर्वाचित हुनुभएको निर्वाचन समितिले जनाएको छ ।
← भोली देखि सुरु हुने प्रदेशसभा बैठकको तयारी पूरा
पपु नायक पौष महिनाको सर्वाेत्कृष्ट प्रहरी घोषित →
कम्मरमुनीको भाग नचल्दा युवाको उपचारमा समस्या